Setimadi Dainikकार्याशाला आयोजना गर्दा अलमलमा पर्ने प्रदेशका उपाध्यक्षले कस्तो बनाउलान् प्रदेशको नीति तथा योजना ? - Setimadi Dainik
कार्याशाला आयोजना गर्दा अलमलमा पर्ने प्रदेशका उपाध्यक्षले कस्तो बनाउलान् प्रदेशको नीति तथा योजना ?
उद्घाटन सत्रमा गण्डकी प्रदेशको दोस्रो वरियताका रुपमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरुङलाई कार्यशालाको अध्यक्ष बनाई उनी भन्दा जुनियर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चुमनलाई प्रमुख अतिथी बनाई कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । जुन विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्री गुरुङले सुरुमै असहमति जनाएका थिए भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चुमनले समेत असहजता महसुस गरेका थिए । जुन विषयलाई सच्याउन मन्त्री गुरुङगले तत्कालै निर्देशन दिएको भएपनि उपाध्यक्ष पौडेलले भने अटेर गरेका थिए । जसले गर्दा उद्घाटन सत्रमा प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा दोस्रो वरियतामा रहेका गुरुङ भन्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चुमनले पछि बोलेका थिए । जुन विषय प्रति आर्थिक मामिला मन्त्री गुरुङगको असन्तुष्टी रहेको थियो । प्राप्तजानकारी अनुसार उपस्थिती उठाउँदा समेत त्रुटिपूर्ण ढंगले गरिएको भन्दै पहिला उठाइएको उपस्थिती मन्त्री गुरुङगल रद्ध गरिदिएका थिए । गुरुङ र चुमन दुबै जना नेकपाका तर्फबाट प्रदेशमा मन्त्री बनेका हुन् । तर वरियाताका हिसाबमा पार्टी र प्रदेश सरकारमा गुरुङ सिनियर मानिन्छन् ।पार्टी र सरकारमा सिनियर रहेका गुरुङगका अगाडि प्रदेश उपाध्यक्षले किन यस्तो हर्कत गरे निकै चासोको साथ हेरिएको छ ।